Aircraft (Enweghị Ngalaba) - Rikoooo
Sont déposés ici les avions wụsa lesquels aucune catégorie n'existe, en aucun Cas, de moins bonne qualité
Peeji nke 1 nke 3 Nsonaazụ 1 - 15 nke 42
a add-on bụ maka FS2004 naanị. Ọ bụ ụgbọ elu ALPHASIM T-34C zuru ezu mana gbanwere 2D- na VC-panel, profaịlụ ikuku, ugboelu.cfg, yana iji sistemu arụmọrụ na ngwangwa etinyere. E meela ka nhazi usoro na arụmọrụ sistemụ dịwanye mma, akụkụ ya na ntanetị gauges, ma gosipụta ozi dị na ntuziaka familiarization NATO-T-34C P-307_wch3.pdf. Na-gbanwetụrụ airfile na plane.cfg ka ịgbanwe ụfọdụ parameters na ugbo elu arụmọrụ nso ka ata ụwa data. Na mgbakwunye, random na pilot ekere uwa maka odida modul na-agbakwunyere i ... GỤKWUO
Alphasim / Virtavia, emelitere site Detlev Rohmer
Nke a bụ Ilyushin Il-76 MD maka FS2004 nke ezigbo oke mma, kokpiiti mebere nke ọma nwere oke na 3D na textures HD, ọrụ dị ịtụnanya! Ihe ngwugwu zuru ezu FSX Pịa ebe a, ugbu a enweghị akwụkwọ ọzọ karịa nke dị na Russian ị nwere ike ibudata ebe a Manual335-Il76.zip (25.8 MB). turbofan usoro nhazi ụgbọelu nke Soviet Union si Ilyushin Bureau. Emeburu atụmatụ ya dị ka onye na-ebu ụgbọ mmiri na 76, dị ka onye nnọchi nke Antonov ... GỤKWUO
Ọ dị oke mma add-on nke Let L-410 Turbolet maka FS2004 nwere ọdụ ụgbọelu na ụda olu ọdịbendị, gụnyere ụdị anọ dị iche iche na-eji ejiji elegharị anya. eji maka njem njem. Kemgbe 410, e mepụtala ihe karịrị ikuku ikuku 1969. (Wikipedia) s GỤKWUO
Ọmarịcha ihe atụ nke ụgbọ elu a nke e mere na Soviet Union, gụnyere ụdị abụọ (MD na TD), ụda ọdịnala, textures abụọ (Russia Ministry for Emergency Situations and Russia - Air Force), animations, nightures textures, complex 2D panel (no VC) nwere ọtụtụ echiche, akwụkwọ ntuziaka PDF na Russian (enwere ike ịtụgharị ya na Google Translate). Lygbọ elu adịghị mfe iji fee efe na nke chọrọ ihe ọmụma, ntụgharị gị. Iliouchine II-76: Nkọwa Ilyushin Il-76 (aha mkpesa nke NATO: Candid) bụ igwe ụgbọ elu igwe eji arụ ọrụ igwe anọ nke atụmatụ Ilyushin mepụtara. Ọ bụ plann mbụ ... GỤKWUO
n'ihi na FSX & P3D ụdị dakọtara pịa ebe a add-on bụ a zuru ezu ngwugwu nke B-66-ebibi na mebere kokpiiti na 2d panel tinyere omenala gauges. Onye mbibi Douglas B-66 bụ onye ogbunigwe american, wee gbanwee ka ọ bụrụ ụgbọ elu na-achọpụta ihe: Mgbasa ndị ọrụ na-abanye (mgbanwe-e) Ọgba ọsọ ọsọ ọsọ (/ -key) 2 - Autopilotshift-3 - Electricsshift-4 - Mmanụ & Trimshift-5 - ECUshift-6 - Yoke on / offshift-7 - GPSshift-8 - Minipanel Histoire de cet avion: https://www.aviastar.org/air/usa / ... GỤKWUO
Ejiri FSDS 2.24 kee ụgbọ elu a. N'agbanyeghị eziokwu a, ọ nwere ike ịnye gị ọtụtụ atụmatụ dị naanị na ụdị ndị emebere na gmax - gụnyere ike mmụọ na ịpịgharị ịpịpị nwere ngwa ọrụ na ọkụ ụlọ. Ihe nlere anya nke ndi mmadu na-enye ihe omimi nke Z-43, tinyere usoro nyocha. Dọ aka na ntị: Hụ ndepụta nlele banyere otu esi amalite ụgbọ elu ahụ (na-enweghị iji Ctrl + E). Zlin Z-43 bụ onye ọzọ so na ezinụlọ Z-40 nke Moravan Otrokovice mepụtara. Ezubere ya dị ka ihe eji agbanwe oge a maka L-40 Metasokol na ọkara nke abụọ nke afọ 1960. Ọ bụ constructio ... GỤKWUO
Add-on nke dị ezigbo mma na panel 2D na VC zuru oke, a na-enye ụgbọ elu a na livery pụrụ iche edebara aha F-GNNK. Imirikiti ndị na-anya ụgbọelu French nwere ike ịnwe ma ọ dịkarịa ala awa ole na ole na Robin DR.400 n'ihi na ọ bụ ụgbọelu kachasị gbasaa ebe ụlọ akwụkwọ na-efe efe nọ ebe ahụ. nke ihe nlere anya nke FS2004 site na Eric DantèsAdaptation nke ụdị ụgbọ elu maka FS2004 site n'aka Jean-Pierre Bourgeois Nkọwa nke ezigbo ụgbọ elu: Robin DR400 bụ egwuregwu egwuregwu osisi, chere ... GỤKWUO
Northrop B-2A Mmụọ AlphaSim FS2004 -ekpo ọkụ
n'ihi na FSX/P3D mbipute pịa ebe a Ihe ijuanya nke ụdị dịbu payware mana ugbu a n'efu! B-52 nke mebere ahụ nwere ọdụ ụgbọ mmiri na ụda omenala. Ndepụta nyocha na ntinye aka! Mmụọ Northrop Grumman B-2 (nke a makwaara dị ka Stealth Bomber) bụ onye na-atụ bọmbụ onye America, na-egosipụta teknụzụ steepụ dị ala nke ezubere maka ịbanye na mgbochi mgbochi ụgbọ elu; ọ na-enwe ike idokwa ma ndị nkịtị na ngwa agha nuklia. Onye na-agba bọmbụ ahụ nwere ndị ọrụ abụọ nwere ike ịda ihe ruru iri asatọ na 500 lb (230 n'arọ) - klas JDAM bọmbụ na-eduzi GPS, ma ọ bụ iri na abụọ na 2,400 lb (... GỤKWUO
n'ihi na FSX dakọtara version pịa ebe a Gụnyere Dynamic VC na Custom Gauges na Sound maka FS2004. Ejiri usoro nke Socata TB dị n'etiti 1970s iji dochie Morane-Saulnier Rallye mere agadi. Ha bụ ụgbọ elu dị mfe maka njem ezumike ma ọ bụ azụmaahịa. Aircraftgbọ elu TB-10 Tobago bụ klọb ndị nkịtị na-efe efe, ahaziri ma mee maka ụgbọ elu kwụ ọtọ. O nwere Lycoming O-360 nwere 180 hp, ụgbọ oloko na plọp na-agbanwe agbanwe, nke na-enye ohere oke ịgba ọsọ nke 127 kts (235 km / h). GỤKWUO
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ a add-on n'ihi na FSX Pịa ebe a plagbọ elu a nwere animụ FS zuru ezu. ihe na-egbu maramara na kokpiiti Virtual na ụfọdụ gauges omenala. Gụnyere RAF, Maltese, na Swedish agba nkata, atụmatụ Swedish nwere nke ya SK-61. Scottish Aviation Bulldog bụ ụgbọ elu ụgbọelu Britain n'akụkụ-n'akụkụ (nke nwere oche nke atọ) ụgbọ elu ọzụzụ nke Beagle Aircraft mere dịka B Bulldog nke mbu bidoro na 125 Mee 19 n'ọdụ ụgbọ elu Shoreham. Iwu mbụ maka ụdị ahụ bụ maka 1969 site na Swedish Air Board. Tupu e wuo ụgbọ elu ọ bụla, Beagle Aircraft c ... GỤKWUO
n'ihi na FSX dakọtara version pịa hereThe Rockwell B-1 Lancer bomber bụ ogologo-nso na agbanwe jiometrị mepụtara site na US na 1970s. E wuru ya na mbipụta 100 ma ka na-arụ ọrụ na 2012. Gụnyere ya na 4 repaints, ụda olu ọdịnala, kokpiiti ọfụma na ike ịtụba bọmbụ. Magburu onwe ya mma. ANIMATIONS- Ofụri Esịt animation nku nku na-eduga ihu slats (flaapu igodo) - Animated spoilerons na elevons (akpaka, na osisi n'aka ekpe / aka nri) - Animated nku emebi (ga-'mmapụta' ma ọ bụrụ na keypress-arụ ọrụ, a sim mmachi Mgbe ihe eji emebi ihe, njikwa ihe mmịfe ga - eweghachi ... GỤKWUO
Concorde Final Version-A 2011 FS2004 -ekpo ọkụ
n'ihi na FSX dakọtara variant pịa ebe a bụ ọhụrụ 3d nlereanya nke Concorde nke na-agụnye: ọhụrụ imi udi, visor nkọwa, ofufe Ọnọdụ, zuru ezu n'ezie textures ngwugwu -new PRE-PRODUCTION texture- doro anya textures maka VC panel, pụrụ iche utịp maka nku´ vortices na foogu, afterburner mmetụta, ọdịda lamp´ animation jikọrọ ọdịda Kwadobe ọrụ, animated visor maka isi 2D kokpiiti echiche, mach ọsọ mmetụta (Mr. Rob Barengredt´s). Ihe niile nke xml gauges nke Maazị HANS ZUIDERVAART mere nke mekwara ọtụtụ mgbanwe maka mgbanwe ụgbọ elu, (ọtụtụ ekele maka ... GỤKWUO
n'ihi na FSX dakọtara variant pịa ebe a. Jetstream zuru ezu 31 na 32! Nwa amaala maka FS2004, gụnyere ụda ọdịnala, igbe 3D na 2D na 4 repaints dịka Sun-Air nke Denmark, Eastern Airways (UK), United Express (akụkọ ihe mere eme), Royal Navy T3. Gụọ ntuziaka ndị ahụ. Jetstream 31 bụ obere ụgbọ elu ejima-turboprop, yana fuselage a na-agbanye ume, nke ezubere iji mezuo ahịa ahịa ụgbọ elu mpaghara United States. The Jetstream 31, nke mbụ gbara na 28 March 1980, na-asambodo na UK na 29 June 1982 ọtụtụ narị 31s wuru n'oge 1980s. Na 1985, a n'ihu engine kwalite wa ... GỤKWUO
Add-on Ọdịdị dị elu na nke zuru oke, nke ndị obodo ahụ mara nke ọma Ihe na-egbukepụ egbukepụ, na-egosipụta PSP textures na Specular Highlites Lighting abalị na ọkụ ederede textures Ọkụ ọkụ na-enwu gbaa ọsọ ọsọ De-Icers N'èzí nku, injin, echiche azụ aka ekpe na 2D Views Transparent, reflective 3D passenger and cockpit windows Transparent ... GỤKWUO
The Tupolev Tu-134 (NATO koodu Crusty) bụ ndị nkịtị ụgbọelu ejima-engine Soviet, yiri American Douglas DC-9. Ọ bụ otu n'ime ụgbọ elu nke ọtụtụ mba nke Warsaw Pact. Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ ugbu a na-ebelata n'ihi iwu na-egbochi ụda olu. Tu-134A: Seconddị nke abụọ nwere injin ndị siri ike karị, avionics ka mma na ikike nke ndị njem 84. Na niile variants e wuru na pụrụ iche iko imi dome na Rada n'ihu igwefoto, Nke a add-on bụ maka hardcore simmers, ị ga-agụ akwụkwọ ntuziaka (na Bekee na Russian) ma ọ bụghị, ị gaghị enwe ike s ... GỤKWUO
Soviet Ochie Ịme anwansị